Tsy matoky ireo eritreritra
“Ny didinao no hosaintsainiko, ary hodinihiko ny làlanao. Ny didinao no hiravoravoako; tsy hohadinoiko ny teninao” Sal. 119:15,16
Nankinin’Andriamanitra tamin’ny olona, ao amin’ny teniny, ny fahalalana ilaina ho amin’ny famonjena. Tokony hekena ho fanambarana manam-pahefana, tsy mety diso momba ny sitrapony ny Soratra Masina. Fanevan’ny toetra amam-panahy izany, mpanambara ny foto-pinoana ary mpisedra ny fanandramana. “Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana , ho fandresen-dahatra, fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon’Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin’ny asa tsara rehetra” 2 Tim. 3:16,17.
Nefa ny nanehoan’Andriamanitra ny sitrapony tamin’ny olona tamin’ny alalan’ny Teniny dia tsy nahatonga ny fanatrehana sy ny fitarihan’ny Fanahy Masina ho tsy ilaina akory. Mifanohitra amin’izany no izy, fa nampanantena ny Fanahy Masina ny Mpamonjy, mba hamelatra ny Teniny amin’ny mpanompony, mba hanazava sy hampihatra ireo fampianarany. Ary satria ny Fanahin’Andriamanitra no nanindry mandry ‘ireo mpianatra) ny Baiboly, dia tsy mety hisy velively izany fampianaran’ny Fanahy mifanohitra amin’ny Teniny izany.
Tsy nomena ny Fanahy Masina - na nozaraina, na oviana na oviana mba hisolo toerana ny Baiboly, satria milaza mazava ny Soratra Masina fa ny Tenin’Andriamanitra no faneva tsy maintsy hisedrana ny fampianarana sy ny fanandramana rehetra. Hoy ny apôstôly Jaona: “Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izahao toetra ny fanahy, na avy amin’Andriamanitra ireny, na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin’izao tontolo izao” 1 Jao. 4:1. Ary hoy i Isaia: “Ho amin’ny lalàna sy ny teni-vavolombelona ihany! Raha tsy miteny araka izany teny izany izy, dia olona izay tsy hiposahan’ny fahazavan’ny maraina” Isa. 8:20
Misy fanakianana be natao tamin’ny asan’ny Fanahy Masina noho ny fahadisoan’ny antokon’olona izay mihambo ho mandray fahazavana avy aminy ka milaza fa tsy mila intsony ny fitarihan’ny Tenin’Andriamanitra. Eritreritra fotsiny izay raisiny ho toy ny feon’Andriamanitra ao amin’ny fanahy no mifehy azy, nefa tsy Fanahin’Andriamanitra izany. Ny tsy fanarahana an’ireo eritreritra ireo, sy ny fanaovana an-tsirambina ny Soratra Masina , dia tsy afaka hitarika afa-tsy ho amin’ny korontana , fahadisoam-panantenana sy fahafatesana. Mampandroso ny fikasan’ilay ratsy fotsiny izany. Satria iankinan’ny ain’ny fiangonan’i Kristy ny asa fanompoana ataon’ny Fanahy Masina, dia iray amin’ny zava-kendren’ny Fanahy Masina, amin’ny alalan’ny hevi-diso entin’ny mpandray an-tendrony sy mibirioka amin’ny tafahoatra, ka mahatonga ny vahoakan’Andriamanitra hanao an-tsirambina ny loharano-kery izay nomanin’ny tompontsika io mihitsy. HM, t. 11,12.